Soomaaliya oo moos tayadiisa la hubiyay dhoofisay markii ugu horeysay ku dhawaad 30 sanno - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSoomaaliya oo moos tayadiisa la hubiyay dhoofisay markii ugu horeysay ku dhawaad 30 sanno
November 27, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Xirmooyin mooska Soomaaliya ah. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah moos u dhoofisay dalka Sucuudi Caraabiya markii ugu horeysay muddo sannooyin ah, sida uu sheegay wasiirka beeraha.
Siciid Xuseen Ciid oo ah wasiirka beeraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in mooska la dhoofiyay la hubiyay tayadiisa uuna buuxiyay shuruudaha mooska adduunka loo dhoofiyo, isaga oo intaas ku daray in Turkiga uu noqon doono suuqa labaad oo loo dhoofin doono mooska.
Mooska maanta loo dhoofiyay dalka Sucuudi Caraabiya ayaa la sheegay in uu yahay labo kunteendhar.
Mooska ayaa mar ahaa waxa ugu weyn oo ay Soomaaliya dibada u dhoofiso kaasoo dalku uu ka heli jiray lacag dhan $90 milyan sanadkii, balse waxa uu joogsaday markii dalku uu ka qarxay dagaalkii sokeeyee sanadkii 1991.
Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland oo qaabilay maalgashadayaal ka socda Shiinaha
At least 8 killed in car bomb in Mogadishu
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least eight people were killed in explosion in Mogadishu on Saturday afternoon, security and medical sources say. A car packed with explosives blew up at KM-4 junction in the downtown of Mogadishu. [...]
Washington-(Puntland Mirror) Garsoore federaal oo jooga Hawaii ayaa mamnuucay amarka cusub ee socdaalka Madaxweyne Donald Trump, saacado kadib markii amarkaas uu bilaabmi lahaa xalay oo Khamiis ahayd saq dhexe. Garsoore degmo oo la dhaho Derrick [...]
Madaxweynaha Puntland oo sheegay in $3.6 milyan oo kamid lacagtii lagu qabtay Muqdisho ay leeyihiin ciidanka badda Puntand ee PMPF
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in lacagtii lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho qeyb kamid ah ay leeyihiin ciidanka badda Puntland ee PMPF oo uu Imaaraatka Carabta taageero. Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali oo wareysi [...]